WARBIXIN: Macalin Wengar Oo Ka Hadlay Qaabka Loo Maamulo Ciyaaraha Confederation Cup-ka & Qalabka La Isticmaalo Ee VAR SYSTEM (Seddex Kulan Ayaan Jeclaa In La Isticmaalo Qalabkaan) – Kooxda.com
Home 2017 June Champions League, Dib U Eegid, France, Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Macalin Wengar Oo Ka Hadlay Qaabka Loo Maamulo Ciyaaraha Confederation Cup-ka & Qalabka La Isticmaalo Ee VAR SYSTEM (Seddex Kulan Ayaan Jeclaa In La Isticmaalo Qalabkaan)
WARBIXIN: Macalin Wengar Oo Ka Hadlay Qaabka Loo Maamulo Ciyaaraha Confederation Cup-ka & Qalabka La Isticmaalo Ee VAR SYSTEM (Seddex Kulan Ayaan Jeclaa In La Isticmaalo Qalabkaan)
June 20, 2017 · by	Jamuuni · 0
Maalmahaan kulamada Tartanka Confederation Cup-ka waxaa loo isticmaalaa calaamada muujisa qaladaadka ee loo yaqaano VAR technology, waxaana la hubiyaa sida saxan ee ay wax u jiraan marka ay go’aano qaadanayaan garsooriyaasha.
Macalinka reer France ee hogaamiya kooxda Arsenal oo kooxdaan maamulay wax ka badan 1,100 kulan ayaaa aad usoo dhoweeyey aragtidaasi waxaana uu sheegay inuu xitaa jeclaan lahaan seddex kamid ah kulamada ay dheeshay Arsenal in loo isticmaalo calaamdaasi.
Dhamaan kulamada uu Wengar sheegay waa kuwa Champions League oo ay Arsenal ciyaartay waxaana uu qabaa inay wanaagsanaan lahayd in VAR technology loo isticmaalo ciyaarahaasi.
Arsenal markii ugu dambeeysey ee ay la hareysa tartanka Champions League waxaa ay la ciyaareysey kooxda Bayern Munich waxaana dhacday in mid kamid ah xidigaha kooxda Arsenal roose loo taagay oo laga saaray ciyaarta.
VAR(Video Assistant Referee system) waa qalab gaar ah oo caawiya garsooriyaasha waxaana hada loo isticmaalaa tartanka ka socda Russia ee loogu diyaar garoobayo koobka aduunka ee Confederation Cup.
‘’Waxaan jeclaan lahaa in aalada VAR lagu fiiriyo goolkii bar baraha ee kooxda Barcelona 2006 , sababtoo ah garab dhaaf ama (Offside ) ayuu ahaa , waxaana ciyaarta aan ku hogaamineyney 1-0 , 30 daqiiqo ka hor.
‘’Waana sababta aan ugu guuleeysan weyney koobka, sidaasi darteeda aniga ahaan muhiim ayaan u arkaa.
‘’Mida labaad , waxaan jeclaan lahaa kaarkii labaaad ee jaalaha lasiiyey Van Persia kulankii aan wajahnay Barcelona 2011 , sababtoo ah waxaa meesha ka dhacay awood, weyna adkeeyd in go’aan la qaato.
‘’Midda 3aad, laga yaab inuu ahaa goor dhow waa markii aan wajahdnay kooxda Bayern Munich , waxaa kaar roose lasiiyey Laurent Koscielny, waxaana la dhigay rigoore mana ahayn sax, sababtoo ah marka ay waxaas dhacayeen Lewandowski ayaa ahaa (OFFIDE).
Hogaamiyaha kooxda Arsenal ayaad u maleeysaa inuu diiwaan geliyey waxyaabo badan , balse Wengar iyo kooxdiisa sanadkaan kama mid ahan ka qeeyb galiyaasha Champions League.
Filed in: Champions League, Dib U Eegid, France, Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino